သူမမွေးနေ့အတွက် Europe ကနေ မြန်မာပြည်ကို ချက်ချင်းရောက်လာတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ပျော်နေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ - Grand Parents-Day
Home / Celebrity / သူမမွေးနေ့အတွက် Europe ကနေ မြန်မာပြည်ကို ချက်ချင်းရောက်လာတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ပျော်နေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ
သူမမွေးနေ့အတွက် Europe ကနေ မြန်မာပြည်ကို ချက်ချင်းရောက်လာတဲ့ ချစ်သူကြောင့် ပျော်နေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ
ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ "မနေ့ညက ၁၂ နာရီလည်းထိုးရော ကိုယ့်ကို surprise ဝိုင်းလုပ်ကြတာအရမ်း surprised ဖြစ်ပြီးတကယ်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ် Special thanks to my mom for always being there for me. 😭🙏🏻 And my love who flew all the way from Europe to Myanmar with the presents for my birthday. 😘❤️🎁💝 And my best friend Liam who arranged this birthday trip. 😍❤️🙏🏻 Thank you, thank you, thank you very much! You guys meanalot to me I love you guys! 😭❤️😘🙏🏻😍Thanks to Sofietel and the staffs!!! 🙏🏻
သူငယ်ချင်း surprise လုပ်ပေးချင်တဲ့အတိုင်း birthday cake လေးရော bouquet လေးရောစီစဉ်ပေးပြီးအခန်းထဲအထိလာရောက်ပါဝင် surprise လုပ်ပေးကြတဲ့ Sofietel မှ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ staffs များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်And everyone who wishes me Happy Birthday! Thank you! ☺️🙏🏻" ဆိုပြီး သူမကို မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ Europe ကနေ မြန်မာအထိလာပြီး လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ချစ်သူကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောထားတာပါ။
သူမရဲ့ စိတ်ချယုံကြည်မှုကို အပြည့်အဝရရှိအောင် ချစ်ပြတတ်တဲ့ ချစ်သူရဲ့ ရိုးသားမှုကြောင့် ရှာရှာလေးတစ်ယောက် အရမ်း ဂုဏ်ယူနေရတာပါ။ မင်းသမီး​ချော​လေး ပတ်ထရစ်ရှာက​တော့​ လတ်​တ​လောမှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ဖြစ်နေပြီး ရုပ်​ရှင်​တွေလည်း ရိုက်​ကူးဖြစ်​နေတယ်​လို့ သိရပါတယ်​။ မိုမို​လေးချစ်​ပရိသတ်​တွေလည်း ကြင်နာတတ်တဲ့ ချစ်သူကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ ရှာရှာလေးကိုချစ်​ရင်​share သွားကြဖို့ မ​မေ့ပါနဲ့​နော်​။